कार चढ्न चाहानेलाई खुसीको खबर ! मासिक १५ हजार तिर्नुहास्, कार चढ्नुहोस् – Etajakhabar
कार चढ्न चाहानेलाई खुसीको खबर ! मासिक १५ हजार तिर्नुहास्, कार चढ्नुहोस्
काठमाडौंः कार किन्न चाहनेहरुका लागि एकै पटक जम्ममा गर्नुपर्ने मोटो रकमले समस्या निम्त्याउने गरेको छ । जसका कारण कार किन्ने योजना नै मानिसहरुले पर सार्ने गरेका छन् । तर अब भने यस्तो नहुने भएको छ । मेगा बैंक र नारायणी अटो विजनेश प्रालिबीच सरल किस्तामा अटो लोन प्रदान गर्ने सम्झौता गरेका छन् ।
नारायणी अटोबाट गाडी किन्न चाहने ग्राहकहरुलाई मेगा बैंकले सरल, सहज र शुलभ दरमा १० वर्षसम्म वित्तीय सुविधा प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । बुधबार भएको उक्त सम्झौतामा मेगा बैंककी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुपमा खुञ्जेली र नारायणी अटो विजनेश लिमिटेडका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक अनुपकुमार बरालले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
नारायणी अटो र मेगा बैंकबीच भएको सम्झौता अनुसार नारायणी अटोबाट गाडी लिँदा ग्राहकहरुले १० वर्षसम्मको वित्तीय सुविधा पाउने भएका छन् । जसमध्ये सुजुकीको अल्टो, वागेन आर र सेलेरियो गाडीमा ३५ प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गरेपछि १५ हजार मासिक किस्तामै गाडी किन्न सकिने भएको छ ।
ग्राहकहरुले अहिलेको प्रचलित ब्याजदर अनुसार जम्मा साढे १२ प्रतिशतमा अटो लोन लिन सक्नेछन् । प्रक्रिया सुरु गरेको २४ घण्टाभित्रै निर्णय र ७ कार्य दिनमै कर्जा प्रवाह गरिने बैंकले जनाएको छ । नारायणी अटो विजनेशसंग भएको सम्झौता अनुसार उक्तपभोक्तालाई जति सक्दो छिटो र सरल तवरले सेवा प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता बैंकले गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, साउन ३१, २०७५ समय: १०:१६:३९